A na-akpọ ekweisi ikuku Apple na-akpọ AirPods | Akụkọ akụrụngwa
A na - akpọ Apple earbuds wireless Apple na AirPods
Taa, Apple Keynote mere ọtụtụ ihe karịa naanị iPhone. N'ezie, anyị na-ekwu maka ngwaọrụ mbụ na-enweghị mmiri na ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ, mana ihe na-adọta uche anyị ugbu a bụ ekweisi ikuku ọhụụ nke ụlọ ọrụ Cupertino nwere obiọma iji chee n'ehihie ụnyaahụ. AirPods bụ ihe Apple kpebiri ịkpọ oku ntị ya na-enweghị eriri. Igweisi a nwere nkà na ụzụ na mmepe nke ọma, na-eburu n'uche na ụdị dị na asọmpi ahụ, mana ọ nweghị onye na-enye nnwere onwe, imewe na arụmọrụ nke AirPods na-enye.
Apple achoro ikpo oku ya site na njiri mara "smart." Maka ya Ha nwere obere nhazi a na-akpọ W1 onye ga-ahụ maka ịme mkpebi kacha mma maka igwe anaghị ekwu okwu anyị. AirPods bụ ngwa nke ga-adị mkpa ịzụta iche iche. N'ihe banyere atụmatụ, ngwaọrụ abụọ ahụ ga-enwe igwe okwu, nke ga - eme ka ha ghara iji ya aka, ma jiri ha iche. Ha nwere ihe mmetụta nke ga-ekpebi mgbe anyị na-eyi ha ma ọ bụ na ọ bụghị na ntị, n'ebumnuche nke ịkwụsị ma ọ bụ ịmalite egwu egwu.
Olee otú ọ pụrụ ịbụ na uzọ ọzọ, ha na-n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Siri, na mebere nnyemaaka nke Apple ngwaọrụ. Ndị AirPod ga-enwe igbe nwere teknụzụ NFC, nke ga - enyere aka mgbe ị na - etinye ekweisi na ngwaọrụ, dịka ha ga - arụ ọrụ naanị site na iweta igbe ahụ nso na ngwaọrụ iOS. N'aka nke ọzọ, igbe ahụ na-eme dị ka chaja maka ekweisi. Ndị a AirPods nwere 5h nnwere onwe na otu ụgwọ, na 15min nke ụgwọ nye 3 awa mmeputakwa. Ọ bụrụ na anyị jikọtara obodo kwụụrụ nke ikpe na-akwụ ụgwọ anyị ga-enwe 24 awa nke ọrụ na-enweghị nsogbu. Ahịa na Spain bụ € 179 ha adịlarị na thelọ Ahịa Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » A na - akpọ Apple earbuds wireless Apple na AirPods
PlayStation 4 nke tara ahu, Gwọ na ụbọchị mwepụta